अध्ययनबाट थाहा भयाे, जाे मानिस राती अबेर सुत्छन् उनीहरुमा डिप्रेसनकाे समस्या बढी देखिन्छ - News20 Media
अध्ययनबाट थाहा भयाे, जाे मानिस राती अबेर सुत्छन् उनीहरुमा डिप्रेसनकाे समस्या बढी देखिन्छ
May 1, 2021 N20LeaveaComment on अध्ययनबाट थाहा भयाे, जाे मानिस राती अबेर सुत्छन् उनीहरुमा डिप्रेसनकाे समस्या बढी देखिन्छ
काेलाेराडाेकाे बाेल्डर विश्वविद्यालयमा गरिएकाे अध्ययनका प्रमुख सेलिन वेटरले भनेका छन्- विहान छिटाे उठ्नु अत्यन्त फाइदाजनक छ, याे कुरा जाे काेहीले विहान छिटाे उठेर पनि महसुस गर्न सक्छन् र विहान चाँडाे उठ्ने हाे भने डिप्रेसनकाे सम्भाव कम हुने एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेकाे छन ।
उनले थपेका छन्, ‘अध्ययनबाट हामीलाई थाहा भयाे, जाे मानिस राती अबेर सुत्छन् उनीहरुमा डिप्रेसनकाे समस्या बढी देखिन्छ /
शाेधकर्ताहरुका अनुसार राती अबेर सुत्नेहरुकाे विवाह हुने सम्भावना पनि अत्यन्त कम हुन्छ । यसले गर्दा राती अबेर सुत्नेहरुले एक्लाे जीवन बिताउने सम्भावना बढ्न थाल्छ । यसले गर्दा धूमपान गर्नेहरुकाे तथा सुत्ने समय नियमित नहुनेहरुमा डिप्रेसनकाे समस्या बढ्न थाल्छ ।
३२ हजार नर्समा भएकाे थियाे अध्ययन
साइकेट्रिक रिसर्च नामकाे जर्नलमा प्रकाशन भएकाे याे अध्ययन ३२ हजार नर्सहरुमा गरिएकाे थियाे । उनीहरुकाे समय र उनीहरु सुत्ने समयलाई लिएर याे अध्ययन गरिएकाे थियाे । अध्ययनमा सामेल भएका नर्सहरुमा सुत्ने र उठ्ने समय दिनदिनै फेरिने भएकाले उनीहरुमा डिप्रेसन देखिएकाे थियाे ।
किन महिलालाई नै हुन्छ ?
जाडो मौसममा दिन छोटा तथा रात लामा हुन्छन् । जाडोमा सूर्यको किरण हाम्रो शरीरमा पर्याप्त मात्रामा पर्दैन । जाडोले मस्तिष्कको कार्यसम्पादनमा समेत प्रभाव पार्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो मस्तिष्कमा भएको ‘सेरोटोनिन’ नामक न्युरो ट्रान्समिटर प्रभावित हुन्छ । सेरोटोनिन घामको प्रकाश शरीरमा प्रवेश गर्दा मात्र उत्पन्न हुन्छ । मस्तिष्कमा प्रवाह हुने टोपामाइन, मेलाटोनिन, मेरिटोनिनजस्ता हार्मोन घटबढ, गडबड वा असन्तुलित हुन्छ, जसले सिजनल डिप्रेसन निम्त्याउँछ ।
सामान्यतया जाडोमा सहने शक्ति पनि घट्छ । पुरुषको तुलनामा महिलाहरू शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छन् भने घरको काम, बालबच्चाको स्याहार–सुसार तथा भान्साको काम बढी हुन्छ । दिन छोटा भएकाले उनीहरूलाई समयमै घरधन्दा सक्नुपर्ने चटारो हुन्छ । कामको चापले महिलाहरूमा तागत पनि कम हुन्छ भने शारीरिक शक्तिमा ह्रास आउँछ । यस्तो अवस्थामा महिलाहरूले आफ्नो कामलाई बाध्यात्मक रूपमा लिन्छन् अनि त्यसकै प्रेसरबाट डिप्रेसन हुन्छ ।
जाडो मौसममा अल्छी लाग्ने, काममा जाँगर नलाग्ने, शरीर कमजोर हुने र थाक्ने, निराश हुने, बढी खाना खान मन लाग्ने, बढी निद्रा लाग्ने जस्ता अनुभव सबैले गर्छन् । यी समस्या जाडो मौसमका सामान्य समस्या हुन् तर यसलाई डिप्रेसन भन्न मिल्दैन । यद्यपि लगातार लामो समयसम्म यही समस्याबाट गुज्रिरहे डिप्रेसन हुनसक्छ
प्रधानसेनापति थापाले गरे यस्तो उद्घोष, देशभरका सैनिकहरुमा छायो खुसीयाली !
February 20, 2020 N20
कोरोना संक्रमितले भरिभाउ, भुइमा उपचार गर्न बाध्य